ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားနဲ့ ကံမစပ်ခဲ့တဲ့ ဂန္ထ၀င်ကစားသမားတွေက ဘယ်သူများလဲ
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား မရဖူးခဲ့တဲ့ ဂန္ထ၀င်ကစားသမားများ
14 Sep 2018 . 3:51 PM
တကယ်လို့ ဘောလုံးလောကသာ ပြဇာတ်ရုံကြီးတစ်ခုသာဆိုရင် ချန်ပီယံလိဂ်ဆိုတာက ကစားသမားတစ်ဦး အတွက် အကောင်းဆုံး တင်ဆက်ပြသခွင့်ရမယ့် ဇာတ်ခုံလို့ ဆိုရမလား။ ဘောလုံးသမားတစ်ဦး ထိပ်သီးအသင်းတွေကို ပြောင်းရွှေ့ ကစားကြတယ်ဆိုတာကလည်း ဥရောပရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအမြင့်မားဆုံး ချန်ပီယံလိဂ် ဆုဖလား ကိုင်မြှောက်ခွင့်ရဖို့ပဲ မဟုတ်လား။ ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ကိုင်မြှောက်ခွင့် ရခဲ့တဲ့ Finest Players တွေက အများကြီးပါပဲ။ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ၊ မက်ဆီ Messi ၊ ဇာဗီ Xavi ၊ ပေါလ်စခိုးလ် Paul Scholes စသဖြင့်ပေ့ါ။ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ရယူဖူးမှ ဂန္ထ၀င်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဒီဖလားကို မရခဲ့ပေမယ့် ဂန္ထ၀င်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ကစားသမားတွေအတွက် မတရားဘူးလို့ ဆိုရမယ်။ သူတို့တွေထဲမှာ ဒီဆုဖလား ရဖို့ လက်တစ်ကမ်းအလိုမှ လက်လွှတ်ခဲ့ရသူ၊ တခြား ဆုဖလားတွေ အများကြီးရခဲ့ပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားတစ်လုံးသာ ကွက်လပ်ဖြစ်ခဲ့ရသူတွေ အများကြီးပါပဲ။ ဒါကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား မရခဲ့ဖူးတဲ့ ဂန္ထ၀င်ကစားသမားထဲက ပရိသတ်နဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား ကစားသမား (၅)ဦးကို ပြန်ပြောင်း ဖော်ပြချင်ပါတယ် . .
၅ . ဖေဘီယိုကင်နဗာရို Fabio Cannavaro
ဒီ အီတလီဂန္ထ၀င်ကြီးဟာ အမှတ်ပေးဖလားမျိုးစုံ၊ Ballon d’Or ဆု ၊ ကမ္ဘာ့ဖလားလို ထိတ်ထိတ်ကြဲ ဆုဖလားတွေ ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲ သူ့ ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက်မှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ကိုင်မြှောက်ခွင့် မရခဲ့ဘူး။ ပိုဆိုးတာက ကင်နဗာရိုဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲတောင် တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးဘဲ အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဆိုလို့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က အင်တာမီလန်နဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ် ရောက်ခဲ့ဖူးတာပါ။
ကင်နဗာရိုရဲ့ ကစားသမားဘ၀ အောင်မြင်မှုများ
ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူးတွေထဲက တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ် (၇၃)ပွဲမှာ (၅၆)ဂိုး သွင်းခဲ့တဲ့ ဒတ်ခ်ျဝါရင့်တိုက်စစ်မှူးကြီး နစ္စတယ်ရွိုင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲ တစ်လျှောက် စတုတ္ထဂိုးသွင်း အများဆုံးကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်နေသူပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေ ၊ ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်တွေက ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ရယူဖို့အတွက် အထောက်အကူ မဖြစ်စေခဲ့ဘူး။ ကင်နဗာရိုလိုပဲ နစ္စတယ်ရွိုင်းလည်း ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ဖူးပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်က မန်ယူအသင်းနဲ့ ရောက်ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နစ္စတယ်ရွိုင်းရဲ့ ကစားသမားဘ၀ အောင်မြင်မှုများ
၃. ဘူဖွန် Buffon
ဒီစာရင်းထဲမှာ ဘူဖွန်လို ကစားသမားမျိုး ပါဝင်နေတာက တကယ့်ကို စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ စီးရီးအေ ချန်ပီယံ (၁၁)ကြိမ်၊ ၂၀၀၆ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံ အီတလီဂိုးသမားကြီးက ချန်ပီယံလိဂ်မှာတော့ ကျရှုံးခဲ့ရတယ်။ ပိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက ၂၀၁၄-၁၅၊ ၂၀၁၆-၁၇ (၂)ကြိမ်တိုင်တိုင် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲ ကစားခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် ဘာစီလိုနာ၊ ရီးယဲလ်တို့ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ ဒုတိယနေရာနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ အကောင်းဆုံး အရှုံးသမားဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို မပိုင်ဆိုင်ရဖို့အတွက် ဒီရာသီမှာ PSG အသင်းနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ဆွတ်ခူးနိုင်ဖို့က ဘူဖွန်အတွက် နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက် ဖြစ်လာပါပြီ။
ဘူဖွန်ရဲ့ ကစားသမားဘ၀ အောင်ြမင်မှုများ
အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ မတူညီတဲ့ ကလပ်အသင်း(၇)သင်းနဲ့ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ဖူးပေမယ့် တစ်ခါမှ ချန်ပီယံ မဖြစ်ခဲ့တာက အံ့သြစရာပါပဲ။ အီဘရာဟီမိုဗစ်အတွက် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားက လုံးဝ ကံမစပ်ဘူးလို့ ဆိုရမယ်။ အီဘရာဟီမိုဗစ်ရဲ့ ကစားသမားဘ၀မှာ PSG ကလွဲပြီး သူ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ အေဂျက်စ်၊ ဂျူဗင်တပ်စ်၊ အင်တာမီလန်၊ ဘာစီလိုနာ၊ အေစီမီလန်၊ မန်ယူအသင်းတို့ဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ရခဲ့ဖူးတဲ့ အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာ ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ ဘယ်လောက်အထိ ကံမစပ်သလဲဆိုရင်၊ ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီမှာ အင်တာမီလန်ဗိုလ်စွဲတော့ အဲဒီရာသီမစခင်မှာ ဘာစီလိုနာကို ပြောင်းခဲ့တယ်။ ၂၀၁၀-၁၁ ရာသီမှာ ဘာစီလိုနာအသင်း ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရခဲ့တော့လည်း အီဘရာဟီမိုဗစ်က အေစီမီလန်အသင်းမှာ အငှားသွားကစားနေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
အီဘရာဟီမိုဗစ်ရဲ့ ကစားသမားဘ၀ အောင်မြင်မှုများ
“ဒိုကြီး”လို့ မြန်မာပရိသတ်တွေ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ ဘရာဇီးလ် တိုက်စစ်မှူးကြီး ရော်နယ်လ်ဒို ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား မရဖူးတာက ဘောလုံးလောကအတွက် တကယ့်ကို Great Loss ပါပဲ။ Ballon d’Or (၂)ကြိမ်၊ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆု ရရှိခဲ့သူ ရော်နယ်လ်ဒိုကလည်း အီဘရာဟီမိုဗစ်လို ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားနဲ့ ကံမစပ်ခဲ့ဘူး။ ၂၀၀၆-၀၇ ရာသီဝက်မှာ အေစီမီလန်အသင်းဆီ ရောက်ခဲ့ပြီး အဲဒီနှစ်မှာ အေစီမီလန်အသင်း ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ရခဲ့ပေမယ့် ရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ရီးယဲလ်နဲ့ Cup Tie မိခဲ့လို့ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ပါဝင်ကစားခွင့် မရခဲ့ပါဘူး။
ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ကစားသမားဘ၀ အောင်မြင်မှုများ
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားဆိုတာက နတ်ကြီးတယ်ဆိုတာ ဒီကစားသမားတွေကို ကြည့်ရင် ပရိသတ်တွေ နားလည်ကြမှာပါ။ ဒီကစားသမားတွေဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား မရခဲ့ဖူးပေမယ့် ဘောလုံးလောကရဲ့ ဂန္ထ၀င်စာရင်းမှာ မပါမဖြစ် ထည့်သွင်းရမယ့်သူတွေပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ် . . .
ခနျြပီယံလိဂျဖလား မရဖူးခဲ့တဲ့ ဂန်ထဝငျကစားသမားမြား
တကယျလို့ ဘောလုံးလောကသာ ပွဇာတျရုံကွီးတဈခုသာဆိုရငျ ခနျြပီယံလိဂျဆိုတာက ကစားသမားတဈဦး အတှကျ အကောငျးဆုံး တငျဆကျပွသခှငျ့ရမယျ့ ဇာတျခုံလို့ ဆိုရမလား။ ဘောလုံးသမားတဈဦး ထိပျသီးအသငျးတှကေို ပွောငျးရှေ့ ကစားကွတယျဆိုတာကလညျး ဥရောပရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာအမွငျ့မားဆုံး ခနျြပီယံလိဂျ ဆုဖလား ကိုငျမွှောကျခှငျ့ရဖို့ပဲ မဟုတျလား။ ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ကိုငျမွှောကျခှငျ့ ရခဲ့တဲ့ Finest Players တှကေ အမြားကွီးပါပဲ။ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ၊ မကျဆီ Messi ၊ ဇာဗီ Xavi ၊ ပေါလျစခိုးလျ Paul Scholes စသဖွငျ့ပေ့ါ။ ခနျြပီယံလိဂျဖလား ရယူဖူးမှ ဂန်ထဝငျဖွဈမယျဆိုရငျ ဒီဖလားကို မရခဲ့ပမေယျ့ ဂန်ထဝငျအဖွဈ သတျမှတျခံထားရတဲ့ ကစားသမားတှအေတှကျ မတရားဘူးလို့ ဆိုရမယျ။ သူတို့တှထေဲမှာ ဒီဆုဖလား ရဖို့ လကျတဈကမျးအလိုမှ လကျလှတျခဲ့ရသူ၊ တခွား ဆုဖလားတှေ အမြားကွီးရခဲ့ပမေယျ့ ခနျြပီယံလိဂျ ဖလားတဈလုံးသာ ကှကျလပျဖွဈခဲ့ရသူတှေ အမြားကွီးပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ခနျြပီယံလိဂျဖလား မရခဲ့ဖူးတဲ့ ဂန်ထဝငျကစားသမားထဲက ပရိသတျနဲ့ ရငျးနှီးပွီးသား ကစားသမား (၅)ဦးကို ပွနျပွောငျး ဖျောပွခငျြပါတယျ . .
၅ . ဖဘေီယိုကငျနဗာရို Fabio Cannavaro
ဒီ အီတလီဂန်ထဝငျကွီးဟာ အမှတျပေးဖလားမြိုးစုံ၊ Ballon d’Or ဆု ၊ ကမ်ဘာ့ဖလားလို ထိတျထိတျကွဲ ဆုဖလားတှေ ရယူနိုငျခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ကံဆိုးစှာနဲ့ပဲ သူ့ ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျမှာ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ကိုငျမွှောကျခှငျ့ မရခဲ့ဘူး။ ပိုဆိုးတာက ကငျနဗာရိုဟာ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲတောငျ တဈခါမှ မရောကျဖူးဘဲ အမွငျ့ဆုံးအဆငျ့ဆိုလို့ ၂၀၀၃ ခုနှဈက အငျတာမီလနျနဲ့ ဆီမီးဖိုငျနယျ ရောကျခဲ့ဖူးတာပါ။
ကငျနဗာရိုရဲ့ ကစားသမားဘ၀ အောငျမွငျမှုမြား
ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲရဲ့ ဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူးတှထေဲက တဈဦးအဖွဈ သတျမှတျခံထားရသူဖွဈပါတယျ။ ခနျြပီယံလိဂျ (၇၃)ပှဲမှာ (၅၆)ဂိုး သှငျးခဲ့တဲ့ ဒတျချြဝါရငျ့တိုကျစဈမှူးကွီး နစ်စတယျရှိုငျးဟာ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲ တဈလြှောကျ စတုတ်ထဂိုးသှငျး အမြားဆုံးကစားသမားအဖွဈ ရပျတညျနသေူပါ။ ဒါပမေဲ့ သူ့ရဲ့ သှငျးဂိုးတှေ ၊ ဂိုးသှငျးစှမျးရညျတှကေ ခနျြပီယံလိဂျဖလား ရယူဖို့အတှကျ အထောကျအကူ မဖွဈစခေဲ့ဘူး။ ကငျနဗာရိုလိုပဲ နစ်စတယျရှိုငျးလညျး ခနျြပီယံလိဂျမှာ ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့ကို အမွငျ့ဆုံးရောကျခဲ့ဖူးပွီး ၂၀၀၂ ခုနှဈက မနျယူအသငျးနဲ့ ရောကျရှိခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
နစ်စတယျရှိုငျးရဲ့ ကစားသမားဘ၀ အောငျမွငျမှုမြား
၃. ဘူဖှနျ Buffon
ဒီစာရငျးထဲမှာ ဘူဖှနျလို ကစားသမားမြိုး ပါဝငျနတောက တကယျ့ကို စိတျမကောငျးစရာပါပဲ။ စီးရီးအေ ခနျြပီယံ (၁၁)ကွိမျ၊ ၂၀၀၆ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံ အီတလီဂိုးသမားကွီးက ခနျြပီယံလိဂျမှာတော့ ကရြှုံးခဲ့ရတယျ။ ပိုဝမျးနညျးစရာကောငျးတာက ၂၀၁၄-၁၅၊ ၂၀၁၆-၁၇ (၂)ကွိမျတိုငျတိုငျ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးနဲ့အတူ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲ ကစားခှငျ့ရခဲ့ပမေယျ့ ဘာစီလိုနာ၊ ရီးယဲလျတို့ကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့လို့ ဒုတိယနရောနဲ့သာ ကနြေပျခဲ့ရတယျ။ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲမှာ အကောငျးဆုံး အရှုံးသမားဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျကို မပိုငျဆိုငျရဖို့အတှကျ ဒီရာသီမှာ PSG အသငျးနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဖလား ဆှတျခူးနိုငျဖို့က ဘူဖှနျအတှကျ နောကျဆုံးမြှျောလငျ့ခကျြ ဖွဈလာပါပွီ။
ဘူဖှနျရဲ့ ကစားသမားဘ၀ အွောငျမငျမှုမြား
အီဘရာဟီမိုဗဈဟာ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲမှာ မတူညီတဲ့ ကလပျအသငျး(၇)သငျးနဲ့ ပါဝငျဆငျနှဲခဲ့ဖူးပမေယျ့ တဈခါမှ ခနျြပီယံ မဖွဈခဲ့တာက အံ့သွစရာပါပဲ။ အီဘရာဟီမိုဗဈအတှကျ ခနျြပီယံလိဂျဖလားက လုံးဝ ကံမစပျဘူးလို့ ဆိုရမယျ။ အီဘရာဟီမိုဗဈရဲ့ ကစားသမားဘဝမှာ PSG ကလှဲပွီး သူ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ အဂေကျြဈ၊ ဂြူဗငျတပျဈ၊ အငျတာမီလနျ၊ ဘာစီလိုနာ၊ အစေီမီလနျ၊ မနျယူအသငျးတို့ဟာ ခနျြပီယံလိဂျဖလား ရခဲ့ဖူးတဲ့ အသငျးဖွဈပါတယျ။ အီဘရာဟီမိုဗဈဟာ ခနျြပီယံလိဂျနဲ့ ဘယျလောကျအထိ ကံမစပျသလဲဆိုရငျ၊ ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီမှာ အငျတာမီလနျဗိုလျစှဲတော့ အဲဒီရာသီမစခငျမှာ ဘာစီလိုနာကို ပွောငျးခဲ့တယျ။ ၂၀၁၀-၁၁ ရာသီမှာ ဘာစီလိုနာအသငျး ခနျြပီယံလိဂျဖလားရခဲ့တော့လညျး အီဘရာဟီမိုဗဈက အစေီမီလနျအသငျးမှာ အငှားသှားကစားနခြေိနျဖွဈပါတယျ။
အီဘရာဟီမိုဗဈရဲ့ ကစားသမားဘဝ အောငျမွငျမှုမြား
“ဒိုကွီး”လို့ မွနျမာပရိသတျတှေ ခဈြစနိုးချေါကွတဲ့ ဘရာဇီးလျ တိုကျစဈမှူးကွီး ရျောနယျလျဒို ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား မရဖူးတာက ဘောလုံးလောကအတှကျ တကယျ့ကို Great Loss ပါပဲ။ Ballon d’Or (၂)ကွိမျ၊ ဖီဖာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကစားသမားဆု ရရှိခဲ့သူ ရျောနယျလျဒိုကလညျး အီဘရာဟီမိုဗဈလို ခနျြပီယံလိဂျ ဖလားနဲ့ ကံမစပျခဲ့ဘူး။ ၂၀၀၆-၀၇ ရာသီဝကျမှာ အစေီမီလနျအသငျးဆီ ရောကျခဲ့ပွီး အဲဒီနှဈမှာ အစေီမီလနျအသငျး ခနျြပီယံလိဂျဖလား ရခဲ့ပမေယျ့ ရျောနယျလျဒိုဟာ ရီးယဲလျနဲ့ Cup Tie မိခဲ့လို့ ခနျြပီယံလိဂျမှာ ပါဝငျကစားခှငျ့ မရခဲ့ပါဘူး။
ရျောနယျလျဒိုရဲ့ ကစားသမားဘ၀ အောငျမွငျမှုမြား
ခနျြပီယံလိဂျဖလားဆိုတာက နတျကွီးတယျဆိုတာ ဒီကစားသမားတှကေို ကွညျ့ရငျ ပရိသတျတှေ နားလညျကွမှာပါ။ ဒီကစားသမားတှဟော ခနျြပီယံလိဂျဖလား မရခဲ့ဖူးပမေယျ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ ဂန်ထဝငျစာရငျးမှာ မပါမဖွဈ ထညျ့သှငျးရမယျ့သူတှပေဲ ဖွဈပါတော့တယျ . . .